Eduardo Camavinga oo kala doortay Kooxaha Real Madrid, Manchester United iyo Liverpool – Gool FM
Tababaraha Brighton ee Graham Potter oo aragtidiisa ka dhiibtay kooxda uu arko inay tahay tan ugu fiican Ingariiska… (Ma Liverpool mise Man City?)
(Yurub) 01 Juun 2020. Eduardo Camavinga ayaa la soo warinayaa inuu kala doortay Real Madrid, Manchester United iyo Liverpool, isla markaana waxaa la ogaaday kooxda uu doonayo inuu ku biiro.
Camavinga ayaa la caddeeyey inuu doonayo inuu ku biiro Kooxda Real Madrid marka u ka tago naadiga uu haatan ka tirsan yahay ee Rennes.
17-sano jirkaan ayaa u saftay 36 jeer kooxdiisa Faransiiska ah intii lagu jiray xilli ciyaareedkan 2019-20, waxaana si weyn loogu tixgeliyaa inuu yahay mid ka mid ah da’yarta ugu wanaagsan kubbadda cagta Yurub.
Real Madrid ayaa si joogta ah loola xiriirinayay adeegga laacibkan isbuucyadii la soo dhaafay, inkastoo Liverpool iyo Manchester United sidoo kale la rumeysan yahay inay xiiseynayaan xiddiga heerka caalami ee xulka qaranka Faransiiska xiddigaha da’doodu ka hooseyso 21-sano jirrada.
Madaxweynaha Rennes ee Nicolas Holveck ayaa dhowaan sheegay in Camavinga aan loo ogolaan doonin inuu ka tago Roazhon Park inta lagu guda jiro suuqa kala iibsiga xagaagan.
Si kastaba ha noqotee, sida ay warinayso Jariiradda AS ee ka soo baxda dalka Spain da’yarkan ayaa durbadiiba go’aan ka gaaray mustaqbalkiisa, taasoo muujineysa inuu doonayo inuu u dhaqaaqo garoonka Bernabeu marka uu ugu dambeyn raadinayo tartan cusub.
Camavinga oo qandaraaska uu kula jiro Rennes uu ku eg yahay ilaa xagaaga 2022-ka ayaa loo maleynayaa inuu ku qiimeysan yahay haatan 50 milyan oo euro oo u dhiganta 45 milyan oo gini.